I-UP100H - Idivaysi Elinganiselwe Ye-Ultrasonic Laborator - Hielscher Ultrasound Technology
Iprosesa ye-ultrasonic UP100H (100W, 30kHz) iyona idivayisi ephelele ye-sonication yamasampuli ama-lab labancane namaphakathi. Le homogenizer yama-lab esebenzayo, kodwa enamandla, isetshenziselwa ukulungiselela isampula, njenge-emulsifying, dispersing, dissolving and cell disruption.
Iprosesa ye-ultrasonic UP100H (100 watts, 30kHz) inokufanayo i-compact futhi i-ergonomic ukuklama njenge UP50H (Ama-watts angu-50, 30kHz) kodwa ifika kabili ngamandla e-ultrasonic. Ku-1.1kg, kuwukuthi okulula esandleni. Yiqiniso, ukuhlinzwa endaweni yokuma kungenzeka, futhi. I-generator ye-ultrasonic kanye ne-transducer zihlangene kuyunithi eyodwa, ngakho-ke azikho ama-hassle anezintambo zokuxhuma. Ikhebula elilodwa lokunikezela amandla – yilokho kuphela.
Le divayisi ifaneleka kakhulu ku-ultrasonication yamasampula amancane kakhulu kanye naphakathi. Ngokusetshenziswa kwe-sonotrode MS10 uhla lwezinhlelo zokusebenza luya ekwenzeni i-sonication yezinombolo eziningi kufika ku-500ml. Ngakho-ke, le divayisi ye-ultrasonic isetshenziselwa ukulungiselela amasampula ebhodini, njenge:
emulsifying (ukuxuba kwamanzi angenayo i-immiscible)
ukuhlakazeka (ukuxuba ama-powders zibe oketshezi)
ukuphazanyiswa kweseli (lysis) nokukhishwa
Kuhlangene no ukugeleza kweselula D7K Ungakwazi ukuveza izinto ezihamba phambili ekugezeni okuqhubekayo, isib. 10 kuya ku-100mL / min. Ngalokhu, ungakwazi ukulinganisa izinqubo eziqhubekayo ze-sonication ngesilinganiso esincane kakhulu. Njengoba i-UP100H ingaqhutshwa amahora angu-24 ngosuku (24h / 7d), lokhu kusetha kungenza kube ngu-140L ngosuku (kuye ngokuthi isicelo). Okuzikhethela I-PC-Control kungaba usizo, uma irekhodi lokuhlola liyadingeka noma ukwandisa izinqubo.
I-UP100H ivame ukusetshenziselwa ukuhlola okujwayelekile. Kulokhu, ivolumu encane yesampula, isb. 5mL ifakwa emgodini omncane futhi ivuliwe kakhulu nge-sonication isikhathi eside. Isithombe ngakwesokudla (chofoza ukuze ukhulise) kubonisa ukusetha okujwayelekile kokunikezwa okunamandla kwama-sampuli amancane. Njengoba amandla e-ultrasonic efakwa esampheni, uketshezi luyoshisa ngokushesha, ngaphandle kokuba lukhuphuke ngamanzi okugeza. Njengoba ukushisa kungadlulela ebhodini lokupholisa, isampula ingenziwa i-sonicated isikhathi eside, isib. Imizuzu engu-20.
I-Ultrasonic Processor UP100H
for operation ephathekayo noma ukusetshenziswa stand, Ama-watts angu-100, imvamisa ye-ultrasonic 30kHz, automatic frequency tuning system, amplitude adjustable kusuka ku-20 kuye ku-100%, ishayela lingashintshwa lisuka ku-0 liye ku-100%, okuvikelekile komile okuvikelwe ibhokisi le-SPB-L, ngamathuluzi okwanda, ibanga le-IP40, uphondo lwe-titanium ngentambo yabesifazane i-M6x0.75
ubukhulu (LxWxH): 185x130x85mm, isisindo: 1.1kg
115 Volts, AC, isigaba esisodwa, 2A, 50-60Hz
I-230 Volts, AC, isigaba esisodwa, i-1A, 50-60Hz
eyenziwe nge-titanium, ububanzi bephoyinti 1mm, cishe. ubude obuyi-80mm, intambo yamadoda engu-M6x0.75, ngamasampula avela ku-0.1ml kuze ku-5ml
eyenziwe nge-titanium, ububanzi bephoyinti 2mm, cishe. ubude obuyi-80mm, intambo yesilisa engu-M6x0.75, ngamasampuli avela ku-2ml kuya ku-50ml
eyenziwe nge-titanium, ububanzi bephoyinti 3mm, cishe. ubude obuyi-80mm, intambo yesilisa engu-M6x0.75, ngamasampuli kusuka ku-5ml kuya ku-100ml
eyenziwe nge-titanium, ububanzi bephoyinti 7mm, cishe. ubude obuyi-80mm, intambo yamadoda engu-M6x0.75, ngamasampuli kusuka ku-10ml kuze kube ngu-250ml
eyenziwe nge-titanium, ububanzi bephoyinti 7mm, cishe. ubude obuyi-80mm, intambo yamadoda engu-M6x0.75, ene-seal yezinhlelo ezivaliwe
eyenziwe nge-titanium, ububanzi bephoyinti 7mm, cishe. ubude buka-160mm, intambo yamadoda engu-M6x0.75, ne-seal yezinhlelo ezivaliwe
eyenziwe nge-titanium, ububanzi bephoyinti 10mm, cishe. ubude obuyi-80mm, intambo yesilisa engu-M6x0.75, ngamasampuli kusuka ku-20ml kuya ku-500ml
ububanzi 16mm, benziwe ngensimbi engenasisekelo, ubude besisekelo ngu-300mm, ububanzi be-150mm, ukuphakama okungu-500mm
cindezela ukubamba idayim. 0 kuya ku-63mm, eyenziwe nge-aluminium, ukuze isetshenziswe ngokuma kufika ku-16.5mm, isib. ST1-16
ukugeleza kweselula D7K
eyenziwe ngensimbi engenalutho, ngokuzipholisa, ukuxhumeka kwe-hose, oketshezi oluthile, okuzenzekelayo, ngokusebenza nge-sonotrode MS7D, ivolumu cishe. 13ml, ene-adapter yokuma ye-stand ST1-16 (ububanzi buka-16mm)
I-Flow Cell GD7K
okwenziwe ngilazi, ngokuzipholisa, ukuxhuma kwe-hose, oketshezi, okwenziwe ngegazi, ngokusebenza nge-sonotrode MS7D (noma nge-sonotrode MS7L2D ngokuhambisana ne-adapter ye-flask NSA1), ivolumu cishe. I-80ml, nge-clamp yokufakwa endaweni yokuma, isibonelo isib. ST1-16 (ububanzi 16mm)
I-Adapter ye-Flask NSA1
for standard flask-neck, adjustable adjustable, efanelekayo sonotrode MS7L2D ngokuhambisana flow flow cell GD7K
Sonication okunamandla yezidumbu
Idivayisi entsha ye-ultrasonic ye-sonication yemibhalo encane